कार्तिक नाचको लागी अक्षयकोष स्थापना - नेवा: दबू
नेवा: दबूप्रकाशित मिति: २०७७ मंसिर २१, आईतबार (९ महिना अघि)
ललितपुर महानगरपालिका वडा नं १६ ले कार्तिकनाच संरक्षण समितिलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ । अक्षयकोष स्थापनाका निम्ति १६ वडाले गत शुक्रवार समितिका सम्बन्धित व्यक्तिलाई १० लाख रुपैयाको चेक हस्तानतरण गरेको हो ।
उक्त नाच संरक्षणको लागि गत वर्ष अक्षयकोष स्थापना गर्ने कुरा चलेपछि यस वर्ष वडाध्यक्ष निर्मलरत्न शाक्यले १० लाख रुपैयाको चेक हस्तानतरण गरेको समितिका अध्यक्ष किरण चित्रकारले बताएका छन् । उनले भनेका छन्, महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जले पनि अक्षयकोष स्थापना गर्न ५० लाख रुपैया आर्थिक सहयोग गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । योसँगै पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले पनि कोष स्थापना गर्न १० लाख आर्थिक सहयोग दिने बताएका छन् ।
प्रत्येक वर्ष कार्तिक शुक्लपक्ष द्वादसी तिथिका दिन देखाउँदै आएको कार्तिकनाच अन्तर्गतको बराहनाच शुक्रवार सम्पन्न भएको छ । विष्णुपुराणमा आधारित कथा अनुसार गत वर्ष १२ दिन देखाएको उक्त कार्तिकनाच यस वर्ष भने दुई दिन मात्र देखाउने कार्यक्रम अनुसार बराह व नृसिंह अवतार देखाइएको हो । वि.सं. १६९७ मा पाटनका राजा सिद्धिनरसिंह मल्लले देश र जनताको कल्याणका लागि यो नाच प्रचलनमा ल्याएका हुन् । कार्तिकनाच विश्वकै सवैभन्दा लामो नाच भएको भनाई छ ।
कार्तिक नाट्य महोत्सवले जनतालाई एउटै सुत्रमा बाँढेर धार्मिक, नैतिक र सामाजिक ज्ञान समेत दिँदै आएको छ । कार्तिक नाच पहिलोपटक पाँचवटा र सिद्धिनरसिंह मल्लका छोरा राजा श्रीनिवास मल्लको पालादेखि बाथः नाच, सुदामा नाच थप गरी १५ दिन देखाएको ललितपुरका बासिन्दाले जनाएका छन् ।
त्यस्तै, श्रीनिवास मल्लका छोरा योगनरेन्द्र मल्लले उषाहरण र माधवानल दुईवटा लीलालाई थप गरेर कार्तिक महिनाभरी २७ दिन देखाएको उल्लेख छ । मुलुकको ऐतिहासिक साथै सांस्कृतिक सम्पदाको राम्रोसँग संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने आज्जुं बि.सं. २०७० सालमा दुईदिन थप गरी १० दिन र त्यसपछि अर्को दुईदिन थप यानाः १२ दिन देखाउने गर्दै आएको जानकारी समितिले दिएको छ ।राजा सिद्धिनरसिंहका छोरा योगनरेन्द्र मल्लको पालामा कार्तिक महिनाभरी चलाएको उक्त नाचमा १७ वटा कथा वा नाच देखाइने गरेको हो ।
कोरोना महामारी आउनु भन्दा पहिले मुलुककै लामो नाच हेर्न स्वदेशीका साथै विदेशीबाट पनि धेरै पर्यटकहरु पाटन आउने गर्दथे ।